FAQ - Sekonic धातु टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
नमस्ते, तपाईंसँग प्रश्नहरू छन्, हामीसँग उत्तरहरू छन्
यदि तपाईंको प्रश्न छ भने हामी यहाँ मद्दत गर्न आएका छौं। निम्न प्राय: सोधिने प्रश्नहरू जाँच गर्नुहोस् कि यदि अरूले उहि कुरा सोधेको छ भने। हामी तपाइँबाट पनि सुन्न चाहान्छौं, त्यसैले हामीलाई 86 86--05११-86826२266060607 मा कल गर्नुहोस् वा हाम्रो सम्पर्क पृष्ठमा फारम पूर्ण गर्नुहोस्।
सही उद्धरण प्रदान गर्न मबाट तपाईंलाई कस्तो प्रकारको जानकारीको आवश्यक छ?
अधिक जानकारी, राम्रो। जहाँसम्म, निम्न वस्तुहरूले यो सुनिश्चित गर्न सक्छन् कि हामी तपाईंलाई समयमै र सही उद्धरण प्रदान गर्दछौं: एक रेखाचित्र वा विस्तृत आयाम, मिश्र, मात्रा, इच्छित नेतृत्व समय वा जहाज मिति, र विशिष्टता। कृपया नोट गर्नुहोस् कि विनिर्देशहरूमा परीक्षण आवश्यकताहरू, प्रमाणपत्रहरू, प्याकेजि, र कुनै विशेष आवश्यकताहरू समावेश छन्। यदि शंका हो भने तपाईको इनसाइड सेल्स इञ्जिनियरसँग परामर्श लिन नहिचकिचाउनुहोस्
तपाइँको न्यूनतम अर्डर आवश्यकता के हो?
हामी उद्धरण पानामा प्रत्येक आईटमको लागि MOQ सूचित गर्दछौं। हामी नमूना र परीक्षण अर्डर स्वीकार गर्दछौं। यदि एकल वस्तुको मात्रा MOQ मा पुग्न सक्दैन भने, मूल्य नमूना मूल्य हुनुपर्दछ।
तपाईंको सामग्रीहरू पूरा गर्ने मानक विशिष्टताहरू के के हुन्?
Sekonic धातु सामग्री सामान्यतया ASTM, ASME, AMS, GE, र प्रेट र ह्विटनी चश्मा, साथ साथै अन्यमा प्रमाणित हुन्छन्। विशिष्टताको बारेमा थप जानकारीको लागि, एक बिक्री प्रतिनिधिलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
तपाईंसँग कस्तो प्रमाणपत्र छ?
प्रत्येक सामग्री वा उत्पादनहरू, हामी मिल परीक्षण प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछौं (एन १०२०4..1.१ वा EN10204 2.२ उपलब्ध) तेस्रो पार्टी निरीक्षण परीक्षण पनि प्रदान गर्न सकिन्छ यदि तपाईंलाई आवश्यक छ भने!
हाम्रो उत्पादनहरु को लागी वारंटी के हो?
हामीसँग हाम्रा उत्पादनहरूको प्रत्येक उत्पादन चरणलाई नियन्त्रण गर्नका लागि निरीक्षण उपकरणको श्रृंखला छ, कच्चा मालदेखि तैयार उत्पादनहरू (बार, बोल्ट, पाइप, तार, पाना, निकारा, वसन्त) प्रत्येक प्रसंस्करण हाम्रो गुणवत्ता विभाग द्वारा अनुगमन गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं पाउनुहुन्छ असमानता उत्पादनहरू तपाइँको जाँच पछि, हामी प्रतिस्थापन वा तपाईंलाई क्षतिपूर्ति, हाम्रो अन्त मा शिपिंग शुल्क!
कुन फ्रेट क्यारियरहरू सेकोनिक मेटलले प्रयोग गर्छन्?
सेकोनिक धातुसँग राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त फ्रेट क्यारियरहरूको एक सम्झौता छ, तपाईंको अग्रेषक पनि स्वीकार्य छ!
के निर्यात प्याकेजि? उपलब्ध छ?
Sekoinc धातुले तपाईको अर्डरलाई निर्यात शुल्कको लागि अतिरिक्त शुल्कको लागि प्याकेज गर्न सक्दछ। मानक प्याकेजि view हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, लाइभमा क्लिक गर्नुहोस् कुराकानी , वा अधिक जानकारीको लागि बिक्री प्रतिनिधिलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
कुन प्रासंगिक जानकारी मैले मेरो खरीद खरीद (PO) मा राख्नु पर्छ?
अधिक जानकारी, राम्रो। जहाँसम्म, निम्न वस्तुहरू उचित मानिन्छ: विस्तृत आयाम, मिश्र, मात्रा, इच्छित नेतृत्व समय वा जहाज मिति, र विशिष्टता। कृपया नोट गर्नुहोस् कि विनिर्देशहरूमा परीक्षण आवश्यकताहरू, प्रमाणपत्रहरू, प्याकेजि, र कुनै विशेष आवश्यकताहरू समावेश छन्। कुनै पनि प्रश्नको साथ तपाईंको इनसाइड सेल्स ईन्जिनियरसँग परामर्श लिन स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्, वा -5 86-11११-8682626२6060607 मा कर्पोरेट बिक्रीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
तपाईंको नेतृत्व समय कुन छ (डेलिभरी समय)?
तपाईंको बिक्री ईन्जिनियरले उत्पादनको जटिलता र हाम्रो वर्तमान कामको बोझमा निर्भर गर्दै प्रत्येक सोधपुछको लागि लिड-टाइम उद्धृत गर्नेछ। हामी तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दो सबै गर्नेछौं।
कुन वातावरण मेरो वातावरणको लागि उत्तम हो भनेर म कसरी निर्णय गर्न सक्छु?
मिश्र विकल्पहरूको विस्तृत जानकारीका लागि कृपया हाम्रो मटेरियल टेक्निकल डाटा जाँच गर्नुहोस्, तपाईं च्याटमा क्लिक गर्न वा हामीलाई ईमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ!
के तपाईं विशेष आकारको उत्पादनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ?
हामी दुबै मानक र विशेष उत्पादनहरू उत्पादन गर्न सक्छौं। हामी त्यसलाई तपाईंको रेखाचित्र र नमूनाहरू अनुसार बनाउन सक्छौं। कृपया हामीलाई ड्रईंग पठाउनुहोस् हामीलाई मूल्या to्कन गर्नका लागि!
के म मेरो अर्डर काम गर्ने तालिका पाउन सक्छु?
हो, हामी प्रत्येक हप्ता तपाइँको अर्डर को कार्यतालिका पठाउने छौं। हामी शिपमेंट भन्दा पहिले क्षतिग्रस्त र हराइरहेको भागहरूको मामलामा सबै सामानहरूको निरीक्षण र परीक्षण गर्नेछौं। अर्डरको विस्तृत निरीक्षण तस्विरहरू तपाईंलाई पठाइनु अघि तपाईंको पुष्टिकरणको लागि पठाइनेछ।
तपाईं शिपिंग र ह्यान्डलिंगको लागि कति शुल्क लिनुहुन्छ?
तपाईंको स्थान र तपाईंको अर्डर को वजन फ्रेट दर निर्धारण गर्दछ।
यदि मेरो प्रश्न यहाँ सूचीबद्ध छैन भने म के गर्ने?
तपाईंसँग केहि विकल्पहरू छन्। हामीलाई 86 86--5११-86826२2660607 मा सिधै फोन गरेर ईन्साइड सेल्स इञ्जिनियरसँग कुरा गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। यदि तपाईं हाम्रो वेबसाइटमा फारम प्रयोग गरेर आफ्नो प्रश्न बुझाउन चाहानुहुन्छ भने, तपाईं यहाँ क्लिक गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले हामीलाई info@sekoincmetals.com ईमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
स्टेलाइट।, स्टेलाइट रिंग, हेनेस २ W तार, मिश्र धातु R26 बोल्ट, वेल्डिंग तार, स्टेलाइट B बी,